जनयुद्ध दिवसमै प्रचण्डलाई पूर्वएमालेले देखाइदिए पावर, कार्यक्रम नै बहिस्कार !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काठमाडौं– जनयुद्ध दिवसको अवसरमा नेकपा केन्द्रीय कार्यलय धुम्बराहीमा बुधबार कार्यक्रमको आयोजना गरियो।
जनयुद्धका शहीदको सम्झनामा ‘श्रद्धाञ्जलि सभा’को आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो । तर, ओली नगएपछि प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा श्रद्धाञ्जलि सभा सम्पन्न गरियो ।
कार्यक्रममा ओलीमात्रै होइन पूर्व एमालेका शीर्षनेताहरु नै वहिस्कार गरिदिएका छन्। माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र ईश्वर पोखरेलले कार्यक्रम बहिस्कार गरेका हुन्।
यद्यपी पूर्वएमालेका नेताहरु वामदेव गौतम, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेलसहितका नेताहरु भने सहभागी थिए । उक्त कार्यक्रममा पूर्वमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि देखिएनन् । उनी गोरखाको गएको बताइएको छ ।
२०५२ साल फागुन १ गतेबाट सशस्त्र संघर्ष गरेको सम्झनामा तत्कालीन नेकपा माओवादीले फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएको थियो।
योगेश भट्टराईलाई आपत, संसदमै मागियो रजिनामा
जनार्दन शर्माले हल्लाए संसद, ओली सरकारको झुटको पर्दाफास
देउवाले यसरी खोले ओली सरकारको खतरनाक नियत !
BREAKING : नेकपामा खतरनाक भिडन्तको संकेत, ओलीले वामदेवलाई फेरी दिए चक्मा !